समाचार – Page9– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२५ चैत्र २०७६, मंगलवार ०६:३९ English
प्रहरीको गाडीमा ट्राफिकको ह्वील लक ६ माघ २०७६, सोमबार १४:२५
एयरपोर्टमा जहाज ठोक्किए
काठमाडौँ, ६ माघ । त्रिभुवन विमानस्थलमा दुई जहाज ठोक्किएका छन् । जनकपुर हिड्न ठिक्क परेको बुद्ध एयरको जहाज र रोकिराखेको यति एयरलायन्सको जहाज आपसमा ठोक्किएका हुन् । जहाज ठोक्किएपछि बुद्धको जनकपुर उडान रद्द भएको छ । दुबै जहाजमा सामान्य पुगेको छ..
नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष खरेलले दिए राजीनामा
काठमाडौँ, ६ माघ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का अध्यक्ष मदन खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन..
कास्की, ६ माघ । अन्नपूर्ण क्षेको पदयात्राको क्रममा हिमपहिरोमा परी बेपत्ता भएका ४ कोरियन र ३ नेपालीको अवस्था अझै अज्ञात छ । ३ हजार २ सय मिटर उचाइमा अवस्थित हिङ्कुकेभ वरिपरि गत माघ ३ गते बिहान १० बजेको आएकोे हिमपहिरोमा परी उनीहरु सम्पर्कविहीन भएका थिए । घटनामा केही विदेशी पर्यटक तथा..
सिन्धुपाल्चोकमा कर्फ्यु आदेश जारी ५ माघ २०७६, आईतवार ०९:०२
सिन्धुपाल्चोक, ५ माघ । सिन्धुपाल्चोकमा प्रशासनले कर्फ्यु लगाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले अर्को व्यवस्था नभएसम्म आज आइतबार ८ बजेबाट बेलुकी ५ बजेसम्म बाह्रविसे नगरपालिकामा कर्फ्यु लगाएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङ्गले कर्फ्यु आदेश जारी गरेकी..
चीनबाट आएका विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको परीक्षण ३ माघ २०७६, शुक्रबार १३:४७
काठमाडौँ, ३ माघ । चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै नेपाल आएका एक विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । चीनबाट नेपाल आएका विद्यार्थीमध्ये एक जनामा ज्वरो आउने र सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण देखिएपछि शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो । ती..
चिनियाँ पर्यटक बोकेको बस दुर्घटना, ३ जना गम्भिर घाइते
चितवन, ३ माघ । चितवनमा पर्यटक बोकेको बस दुर्घटना हुँदा ३३ जना घाइते भएका छन् । शुक्रबार ११ः१५ बजेतिर भरतपुर महानगरपालिका–१ रामनगरमा दुर्घटना हुँदा २१ जना चिनियाँ पर्यटक घाइते भएका हुन् । काठमाडौंबाट सौराहा हिडेको बा १ प ७८३ नम्बरको पर्यटक बस सोही दिशातर्फ गइरहेको लु २ ख ३३०५..
चितवन, ३ माघ । नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको छ । अवरुद्ध सडक एकतर्फी सञ्चालनका लागि खुलाईएको छ । बिहीबारदेखि परेको वर्षाका कारण चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–६ चारकीलोमा शुक्रबार बिहान पहिरो खसेको हो । पहिरोका कारण सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको र पहिरो..
वर्षाका कारण १३ आन्तरिक उडान रद्द
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ३ माघ । बिहीबार बेलुकादेखिको वर्षाका कारण हवाई उडान प्रभावित भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंबाट देशका विभिन्न स्थानमा हुने उडान रद्द र डिले भएका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म आन्तरिकतर्फ २ वटा र अन्तराष्ट्रियतर्फ एक गरी जम्मा ३ वटा मात्रै उडान भएका छन्..
रासस, मकवानपुर, ३ माघ । पत्रकार मनोहर ढकालको हत्यामा संलग्न दुई जनालाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले ३९ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । पत्रकार ढकालको हत्यामा संलग्न हेटौँडा–११ का २० वर्षीय अनमोल पुडासैनी र हेटौँडा १२ का १९ वर्षीय प्रविण वाइबालाई ३९ वर्षको कैद सजाय सुनाईएको जिल्ला अदालत..
आइतबारसम्मै हिमापत र वर्षा
काठमाडौँ, ३ माघ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पश्चिमी न्युन चापीय प्रणालीका कारण हिमपात र वर्षा भइरहेको जनाएको छ । पश्चिमी, मध्य र पुर्वी पहाडी भेगमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहेको विभागले जनाएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका अधिकांश स्थानहरुमा हिमपात भईरहेको विभागले जनाएको छ ।..
जलाउन ठिक्क पारेको शव प्रहरी नियन्त्रणमा २ माघ २०७६, बिहीबार १५:३५
मोरङ, २ माघ । घाटमा जलाउन लगेको महिलाको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । विराटनगर ८ संघिया घाटमा जलाउन ठिक्क पारिएको अवस्थामा स्थानीय २८ वर्षकी प्रेमदेवी साहको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । बिहीबार विहान मृत्यु भएकी साहको माइती पक्षको उजुरीका आधारमा प्रहरीले शव..
३ दिन भारी हिमपात र वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ, २ माघ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पश्चिमी न्युन चापीय प्रणालीका कारण हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । पश्चिमी, मध्य भू–भागमा र पुर्वी पहाडी क्षेत्रमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहेको विभागले जनाएको छ । ३ दिनको मौसम पूर्वानुमानः माघ २ गते दिउँसोः देशका मध्य तथा..
मेडिकल सञ्चालक प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न अदालतको अनुमति
काठमाडौँ, २ माघ । बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले दायर गरेको मानहानीको मुद्दामा जिल्ला अदालत भक्तपुरले उनलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो..
काठमाडौँ, २ माघ । बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त ढकालको घरमा बम विस्फोट भएको छ । नागार्जुन नगरपालिका १ स्थित घरमा बिस्फोट हुँदा घरको गेट ढलेको, शिशा फुटेको र पार्किङ गरेर राखिएको गाडीमा क्षति भएको छ । विस्फोटबाट मानवीय क्षति नभएको महानगरीय प्रहरी परिसरले..
देवघाटमा प्रहरी भ्यान दुर्घटना, १ को मृत्यु १ माघ २०७६, बुधबार १८:५३
तनहुँ, १ माघ । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका ५ कालिमाटीमा प्रहरी चढेको भ्यान दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने प्रहरी जवान सन्दीप केसी रहेका छन् । दुर्घटनामा परी अन्य ३१ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । देवघाटस्थित माघे संक्रान्ति मेलाको..